Shirkad ka shaqeyneysa Nadaafada oo maanta looga dhawaaqay Magaalada Jowhar.(Sawiro) – Radio Jowhar
Shirkad ka shaqeyneysa Nadaafada oo maanta looga dhawaaqay Magaalada Jowhar.(Sawiro)
Munaasabadaani oo ay soo qaban qaabiyeen Shirkada nadaafada Midnimo ayaa maanta waxaa lagu qabtay Magaalada Jowhar .
Mas,uuliyiinta Maamulka Gobolka Shabelaha dhexe kan degmada Jowhar qeybaha kala duwan ee Bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar gaar ahaan Ganacsatada ,Shirkadaha ka jira magaalada Jowhar Odayasha dhaqanka Culumaa,udiinka ayaa waxaa ugu horeyn hadalo ka soo jeediyay Gudoomiyaha Midnimo Company isagoo fahfaahin ka bixiyay Ujaadada loo aas aasay Midnimo Company,
Ing; G di Xuseen Baroow Gudoomiyaha Midnimo Company ayaa sheegay in ay u dulqaadan waayeen wasaqda taal magaalada Jowhar shaqadana ay soo bilaabeen sanadkii 2014kii wixii ka danbeeyayna ay ka wadeen Howlo nadafaadeed.
Qaar ka tirsan Wax garadka Magaalada Jowhar ayaa aad ugu mahad naqay hal Abuurka Midnimo Company madaama aysan jirin uruuro si gaar ah ugu shaqeeya nadaafada.
G/Kuxigeenka Arimaha Bulshada Degmada Jowhar Xasan baroow Bocor ayaa aad ugu mahad naqay uruurka Midnimo Company isagoo dhinaca kale sheegay in looga baahan yahay wax qabad muuda.
Gebo gabadii ayaa waxaa bdi Xaflada Soo xiray G/kuxiogeenka Arimaha Bulshada Gobolka Shabelaha dhexe Muxumed Sugaal Cabdi ayaa sheegay in Midnimo xafladeeda ay wax weyn aheynin laakin loo baahan yahay in wax badan oo magaalada yaal la qabto.
Maamulka Gobolka Shabelaha dhexe wuu soo dhoweynayaa Midnimo Company laakin waxaan balan qadeynaa in aan garab taaganahay waxaase dooneynaa inaan aragno urur la garab istaagi karo.
Uruurka Midnimo ayaa ah uruurkii ugu horeeyay ee looga dhawaaqo magaalada jowhar oo ka shaqeynaya Nadaafada waxaana uuka shaqeyn donaa Xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Jowhar.